Namuhla, abaningi azibonayo Scooters njengoba inketho for okuphumuzayo, ukunyakaza kancane phakathi komuzi. Yebo, ngempela, kakhulu umqondo walesi imoto yasungulwa ikhumbula nezidingo isakhamuzi yesimanje, kodwa uma waphuma?
Izikuta babe Ubukhulu ezincane. Lokhu kusho ukuthi, naphezu umthamo wayo ezincane, zingabantu kunoma iyiphi isiminyaminya kuzokusa ngokushesha endaweni oya kuyo. Lokhu injongo wakhonza futhi maneuverability zabo eziphakemeyo.
Izikuta kukhona ukonga. Ngenxa yokuthi mincane, akudingeki injini enamandla ukusheshisa. Lokhu kusho ukuthi ukulondoloza imali eningi.
Naphezu kobungako nobuningi bayo, zalamaqembu.I abasakwazi ukhululekile futhi inikeza ithuba ukuba athwale imithwalo ezahlukene.
Ngokuvamile, uma uthanda ukusebenza kahle, i-scooter - inketho yakho ephelele.
Asithathe isibonelo, cabangela isibonelo Stels Vortex 150 futhi Stels Tactic 150.
Vortex design ehlukene swiftness yayo nolaka uwina izinhliziyo abalandeli yezemidlalo isitayela. Stels Vortex Model 150 ukhululiwe, kubhekelwa impendulo akhawunti yekhasimende. Ikakhulu, luyasetshenziswa four-umjikelezo injini emoyeni selehlile, ogama Amandla 8 horsepowers. Lokhu kuvumela le isithuthuthu ngokushesha ukusheshisa amakhilomitha 110 ngehora. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza imodeli Stels Vortex 150 Izibuyekezo eqoqwe ngempela impikiswano. Ake sibone ukuthi kungani kunjalo.
Stels Vortex 150 - imodeli likubeka ngokucacile. It yenzelwe ngokuyinhloko abashayeli asebenzayo futhi abasebasha ulwazi olwanele ukuze bakwazi ukubhekana iyunithi efana. Kuyinto lezi abathengi uzothola kule imodeli yokuthi badinga. It kungokwalabo amateur isigaba Scooters, ne uhlamvu nolaka.
Model 150 Stels Tactic
Lokhu isikuta kufana umfowabo omdala, uchungechunge 100. Kusukela kuye watalwa esihlalweni ukhululekile yokushayela, isiqu evulekile, dashboard. Kukhuphuke ngo eyodwa injini - kwenzile Stels Tactic 150 enomfutho okuningi. I okokunciphisa umsindo ezemidlalo entsha ngempumelelo kwenza ethulile injini msebenzi. i-engeli eziqondisa libanzi. Kuhlanganiswe ne CVT, izonikeza i-okusezingeni eliphezulu induduzo level ne imizuzwana yokuqala uhambo. Lokhu isikuta, ngokungafani into yangaphambilini ye ukubuyekeza kwethu, wanquma ukuba kuthiwe isigaba ezilinganiselayo izimoto. Executive uma ufisa. Stels Tactic 150 owadalwa kulabo bantu isikhathi siqu ezibizayo. Yebo, futhi traffic ke uzokusindisa isikhathi esiningi, imali nezinzwa.
Njengoba ubona, zombili onobuhle anemisila ezine-unhlangothi izinjini. Lokhu kudala lula ezengeziwe abashayeli, ngoba, uma kuqhathaniswa nabangu ezimbili-unhlangothi kumakhophi, ethulile kakhulu ezine-unhlangothi, ngaphansi kuka-petrol kanye kancane monakalo emvelweni. On wonke, umsebenzi motor manje has a uhlamvu bushelelezi - iyunithi azizwa omnandi ukudlula lowo.
Stels Vortex 150 kanye 150 Stels Tactic ifakwe elula insimbi panel nge-LCD isibonisi libonisa umshini wokubonisa izinga lejubane electronic, iwashi, olubonisa ukuthi yocingo olungenayo iselula. Futhi, onobuhle anemisila mkhosi akude.
Njengoba ubona, Scooters - lena umbono omuhle kakhulu kwezokuthutha edolobheni, okuyilona elisebenzayo futhi ukonga kakhulu futhi samukelekile.